प्रत्यक्ष संगीत संग बार युरोप मा सबैतिर पप अप, पेय र गीतहरू मुक्त प्रवाह जहाँ एक जीवंत ठाउँमा समय मार्न तरिका भेटी. यदि तपाईं आफ्नो शहरमा केही रमाईलो गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने रेल यात्रा, हामी केही सुझावहरू भयो. यहाँ हाम्रो शीर्ष छन्5सबै युरोप भन्दा प्रत्यक्ष संगीत संग बारहरू:
रेकर्ड पसल फ्रान्स प्रत्यक्ष संगीत संग सबै भन्दा राम्रो बारहरू मध्ये एक छ. यो केवल Bastille मेट्रो स्टेशन बाहिर छ. मात्र यो छ प्राप्त गर्न सजिलो, तर यो पनि धेरै आरामदायक छ. पट्टी अगाडि छ, र यसको पछाडि वास्तविक कन्सर्ट स्टेज छ संगीत स्थल, यसको पछाडि श्रोताको ठाउँ लुकेको छ.
स्थानीय सिफारिस आरक्षण प्राप्त यदि यो लाइभ संगीत बार भ्रमण गरीरहेको छ तपाईंकोमा यात्रा चेकलिस्ट. किनभने प्रवेश निःशुल्क छ, यो पट्टी मा एक सीट प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ. एक पटक तपाईंलाई छन्, तपाईं संगीत को सबै विधाहरू रमाइलो गर्न सक्षम हुनेछ, पूर्ण प्रत्यक्ष.
पट्टी गरेको ऐतिहासिक स्थान सही San Lorenzo विद्यार्थी क्षेत्र को हृदय मा तपाईं धेरै पूरा गर्न सक्षम मतलब रोचक स्थानीय. कुल मिलाएर, एक प्रामाणिक रोमन अनुभवको लागि, हप्ताको कुनै पनि रात - le Mura अवश्य-यात्रा हो.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 युरोप मा लाइभ संगीत राम्रो बार” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-bars-live-music-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#पिउने भालु #प्रत्यक्ष संगीत #liveshow #म्यूजिकबार europetravel नाइटलाइफ ट्राभेलमस्टरडम travelfrance ट्राभेलपारिस